Abantu abaningi uhlushwa izinkinga ezifana ezibonakala zingasho lutho like unyawo isikhumba coarsened. Yiqiniso, ngeke ukwazi ungakunaki ethembeni ukuthi kuzodlula ngokwalo. Kodwa-ke kukhona corns futhi calluses, okuholela izinkinga nakakhulu. Yilokho lapho siqala ukubheka ithuluzi Uyosisiza sinqobe zonke izinkinga ngesikhumba izinyawo. Yiqiniso, ungakwazi ukuthenga okhilimu noma yokugcoba, kodwa ngokuvamile ayizwakali. Bese siyikhumbule emadwaleni ethafeni, okwaphela amakhulu eminyaka asetshenziselwe le nhloso. Ilula Foot livame ukusetshenziswa ngezinhloso ayeyisimonyo, futhi ikuvumela ukuba bahlale enhle ngaso sonke isikhathi.
Kuyini itshe ilula?
Lapho sizwa izwi "ilula", izingcezu bese ngokushesha samanje lathed Foam ukhonkolo noma slag aqoshiwe ekhaya. Kodwa zonke lezi ngemishini ngalutho ngetshe zemvelo. Ubunjalo ilula ungukukhanya mass lwengilazi okuyinto iqhuma intabamlilo. Kumiswa It is ngesikhathi amagesi yesivini okuyinto chaza ngaphansi kwethonya lokushisa. Ezemfundo ilula ubheka indlela igesi uphuma ibhodlela soda. Ngaphandle ukuthi esimweni sesibili sithola nje igwebu njengokuzijabulisa okungenangozi futhi yokuqala - izimo ezinzima futhi ezingaphephile asendabeni zemvelo.
Ilula endlini yethu
Naphezu homeliness yayo, itshe ukungena nakwamanye amazwe livame ukusetshenziswa design ingaphakathi. Kusukela ngokuvamile ukwenza isisekelo ezihlukahlukene imihlobiso ezimibalabala. Ukudala indawo yemvelo ngoba ukufika izitshalo, kubalulekile ukuba nephupho amatshe ayimigodi encane.
Kodwa-ke, ngokuvamile kungcono kakhulu ukusetshenziswa ilula for imilenze, noma kunalokho sokulungiswa kabusha yabo, ekususweni corneum stratum nokunqanda calluses kanye corns, ukunakekelwa kwesikhumba unyawo.
Abantu abaningi bakholelwa ukuthi sekuyisikhathi eside ke saphela ithuluzi ezifanelekile ngezinyawo ukunakekelwa, kodwa akunjalo. Ngisho nanamuhla, lapho wonke umuntu zingatholakala ezitolo yezimonyo ezihlukahlukene okhilimu, buso, uwoyela, yemvelo itshe ilula zithandwa kakhulu ngenxa izinyawo. It ngokuphelele ithambisa isikhumba, asuse izingqimba isikhumba esifile we epidermis, evumela ukuthi ukuncintisana kalula Scrubs okhokhelwayo. futhi sisiza ukususa calluses kanye corns, ukwenza isikhumba sakho zazivuma ngaphezulu. Yingakho ilula for imilenze, ukubuyekezwa okuyilapho ekulenzeni libe namandla, kuyindlela eshibhe ukulandela ubuhle unyawo. Yiqiniso, akufanele silindele imiphumela esheshayo kakhulu. I ngcono lokuqala uzobona kuphela esingangesonto kuphela ukusetshenziswa nsuku zonke. Bese uzodinga njalo banakekele izithende zakho.
Indlela yokusebenzisa indlu itshe ilula?
Ukubukeka kwaleli tshana akuyona ikakhulukazi amehlo. Ngaphezu kwalokho, abantu abaningi bakholelwa ukuthi ilula for imilenze kuyinto ngempela "nolaka" lisho ukuthini. Bathi-ke abakwazi ukuletha okuningi okuhle njengoba umonakalo. Kodwa amazwi anjengokuthi ungasabalalisa sitholwa kuphela yilabo nje asazi kanjani ukusebenzisa itshe ilula sezinyawo. Kanjani ukuyisebenzisa kahle?
Ungalokothi usebenzise itshe ilula ukuze ome isikhumba zezinyawo. Okokuqala kahle zihlanzwe kusuka ukungcola, rasparte emanzini ashisayo bese kancane eyomile ithawula. Encwadini okugeza umusi, ungakwazi ukwengeza uLwandle Lukasawoti, kwamakhambi ezihlukahlukene amakhambi, isitashi. Ngaleyo ndlela ukuthuthukisa umphumela ukusetshenziswa ilula.
Leli thuluzi kungasetshenziswa kuphela labo izingxenye imilenze, okuyinto abe isikhumba emangelengele noma Horny. Uma usisebenzisa ku amathe kanye izithende izikhathi ezimbalwa, uyobe ngokushesha ubone yalokho ezithile. isikhumba Dead nje uqala izinhlayiya zeqhwa. Lapho unomuzwa wokuthi ukhishwa kancane esivuthayo ukuzwa, ngokushesha ukumisa inqubo.
Sebenzisa ilula njalo is hhayi Kunconywa. Ukuze kuzuzwe ukusebenza udinga amasonto 1-2 "ukusula" isikhumba okungafunwa, bese kuphela ukuba afeze izinyathelo zokuvimbela kanye njalo izinsuku eziyisikhombisa.
Emva inqubo, qinisekisa ukuthi uxubha izinyawo zakho ngamanzi futhi sisebenzise ukhilimu okunomsoco.
Indlela ukukhetha itshe ilula?
Ngokucasuka calluses kanye corns futhi wasebenzisa ilula for imilenze. Indlela ukuyisebenzisa, liye kuchaziwe ngenhla. Le ndlela kufanelekile ikhambi izinkinga eziningi ngesikhumba izinyawo izithende.
Manje kudingeka ufunde indlela ukukhetha iyithuluzi for ukunakekelwa ezinyawo zakho imbala, ngoba itshe ezinhle ilula sezinyawo ukukusiza ukugwema kakhulu izinkinga nabo. Kusukela namuhla, ungakhetha yimuphi ilula, okuyinto ungathola esitolo ubuhle, kodwa gwema okuthiwa okungezona zemvelo, zokwenziwa izindlela. Okokuqala, ziphansi izinga zemvelo. Okwesibili, awayona eqinile nakho ngeke kusize kanjalo oyiyo, ngakho ngokuvamile sokudiliza futhi sidilike ngesikhathi ukusetshenziswa. Yiqiniso, zama ukukhetha umkhiqizo okulula Esandleni sakho, kanye lowo has ikhule ezimbotsheni amancane, ngakho-ke kuyoba nomphumela uyazonga ngaphezulu esikhumbeni.
Namuhla, kunamabandla amabili izinhlobo ilula: zemvelo kanye yokufakelwa. Natural ezifunwa ngabasebenzi, ngoba wenziwe rock mlilo, ukungena nakwamanye amazwe futhi ukukhanya eyatholakala. Ingasetshenziselwa ngaphandle kwezinkinga abanomzimba ongezwani nezinto ezithile, njengoba kunjalo imvelo umkhiqizo friendly okungahambisani ngalesi siyingi kubangele ubuhlungu futhi ububomvu. Ngisho noma ngephutha ona isikhumba ilula yemvelo for imilenze, ungakwazi ungesabi ukuvuvukala. futhi akusho aphule. Naphezu kwazo zonke lezo zinzuzo, libuye libe nemiphumela ethile engathandeki ilula enjalo ngokushesha ugcwaliswe amanzi bese isikhathi eside kakhulu ukuze ome out izinyawo, futhi lokhu kungase kuholele yokuthi amagciwane ngizakwandisa e ikhule ezimbotsheni yayo. Ngakho qiniseka ukuthi ilula wahlala ezomile njalo.
Artificial itshe ilula zahlukahlukene ngempela. Ngokwesibonelo, ungathola ithuluzi elithambile, okuyinto ngokuvamile zisebenzisa isandla ulushit isimo sabo emva okhandlayo esindayo. izici zako ziyizindlela: awusebenzi zigcwala, uma ezimanzi, awusebenzi ukuzalela bacterium, ungagcina ngayo kuqala isikhathi eside. Kodwa khumbula ukuthi itshe yokufakelwa kungenzeka sidilike futhi kubangele ukushisa esikhumbeni lilimele.
Ukusebenzisa ilula ngoba pedicure
Ukuze ukulungisa izinzipho zezandla nezezinyawo okwenziwe ngokuya phambili, ukusebenzisa itshe ilula ngaphambi inqubo. Okokuqala, geza and umusi izinyawo, bese aphathe itshe yonke isikhumba roughened. Geza bese sula izinyawo. Manje usungakwazi aphathe ngokwabo izipikili futhi agqoke nail kubo. Khumbula ukuthi ngeke ukwazi ukusebenzisa itshe ilula emhlabeni izinzipho, esevele embozwe ukuvenisha.
Namuhla, ngaphandle ilula evamile, ungathenga ngamathuluzi ahlukahlukene yesimanje, nakho ekunakekeleni isikhumba izinyawo kanye izithende. Ngakho, ngokwesibonelo, ukuthandwa okwandayo iwine lo okuthiwa ilula liquid imilenze, okuyinto okuthengiswa ngesimo khuhla. Ngosizo ke ungakwazi ezijulile ukuhlanza isikhumba, ukuthambisa futhi moisturize ke. Isici esiyinhloko lolu ilula kukhona powder izinhlayiya ekhethekile, okuyinto exfoliate isikhumba emangelengele, kwenza izinyawo esithambile futhi emnene. Ukwakheka ngokuvamile kuhlanganisa ilula propolis liquid bee emakhilayoni, okuyinto ngcono ukusebenza kusho. Khuhla okumele asetshenziswe ukumanzisa izinyawo futhi uhlikihla kwamaminithi ambalwa, bese hashaza ngamanzi. Ngemva kwalokhu massage kuyinto efiselekayo wagqoka isikhumba sakho ukhilimu.
Ayikho ethandwa kancane iyona ilula electronic for imilenze. Lena umshini ekhethekile, esisetshenziselwa pedicure. Ngosizo ke uzokwazi ukuba ngokushesha futhi ngaphandle kobuhlungu ukususa corns ekhaya. Ngokuvamile iba eziningana Imibhobho esemzimbeni ekhethekile ezinengilazi ezahlukene isikhumba keratinized ngokushesha futhi badutshulwa kulula. I-roller kungaba rotated-30 lihlale linemibhikisho ngomzuzwana, nakuba izinga zingahluka kwezinye tinkhulumo. I ezinamasondo esikhundleni ngokushesha, ngokumane nje uchofoze. Isibambo ine ukuma ergonomic, ngakho-ke ukhululekile ukubamba. Esebenzisa enjalo ilula electronic kungathambisa isikhumba hhayi kuphela kwi izinyawo, kodwa futhi ku izindololwane noma izandla. Umshini ngokuvamile ifakwe amadivaysi ezengeziwe: ibhulashi ukuze bahlanze amabhetri, yokusetshenziswa.
Nokwengezwa Lip. Iyiphi indlela ivikeleke kakhulu?
Indlela ugeze izandla zakho konke kwamafutha: amathiphu namasu